Fuji Japanese Restaurant | Kamaryut | Yangon | yathar
3.45Kamaryut, Yangon
Address Ward 7, Between Pyay Road and, Kyun Taw Rd,, Kamaryut, Yangon
Genre Gyudon (Bowl of rice and beef) , Oden , Tempura , Japanese curry , Japanese bowl
Ward 7, Between Pyay Road and, Kyun Taw Rd,, Kamaryut, Yangon
2018.10.27 Dinner within 2,500 4
ဒီ Fuji Japanese Restaurant လေး က တော့ အကြိုက်တကာ့ အကြိုက်ဆုံးထဲမှာ တခု အပါအဝင်ပါရှင့်. အဲ့ဆိုင်က light food တွေ ဖြစ်တဲ့ ဝက်သား salad ကို နှမ်းဆီ sause လေး စမ်းပြီး စားရတာတော့ အမြိန်ဆုံးပါရှင့် ပြီးတော့ ဖက်ထုပ်ကြော်လေးက မပါမဖြစ်အစားအစာလေးပါရှင့်. အဓိက main dish အနေနဲ့ကတော့ Teriyaki set ဝက်သား နဲ့ ရော ကြက်သားနဲ့ပါ သူ့ sause ကိုတော့ အကြွေဆုံးပါပဲ. ပြီးတော့ Saba ငါးကင် set အရမ်းအရမ်းကြိုက်, ပြောရင်းနဲ့ ဗိုက်တောင်ဆာ